Dhaqanka & Gaadiidka -
WAQTIGA WAXQABADKA (labadaba caalamiga ah iyo US)
Waqtiga lagu shaqeynayo waa maalmaha ganacsiga 5-6. Tani waa qiyaasta kaliya ee ku salaysan wakhtiyada celceliska waqtiga shaqada oo laga yaabo in uu ka dheeraado ama ka gaaban yahay maalmaha 5-6 ee lagu sheegay. Sabtiyada iyo maalmaha fasaxa ma aha maalmo ganacsi.
Nubian Wig line, xiritaan, iyo timo badan wuxuu u baahan doonaa waqti dheeraad ah si uu u socodsiiyo, meel kasta oo udhaxeysa 5-12 maalmo ganacsi sababtoo ah waqtiga ay qaadato si loo abuuro doofaarka, iyo xidhitaanka. Ma haysanno timo shuban (fangas / bocorka) ee timaha. Waad ku mahadsantahay DULQAADKAAGA!
Inta lagu jiro xilliga fasaxa iyo iibinta / taariikhda xayeysiintas waxaa jira caadi ahaan a Maalinta ganacsiga 2-3 in lagu shaqeeyo sababtoo ah xaddi badan oo amarro ah Si kastaba ha ahaatee tani waxay kordhin kartaa ilaa wiig ah dib-u-dhaca.
Lambarada raadinta waxaa lagu dhajin doonaa amarrada oo idil ka dib markii la oggol yahay waqtiga la shaqeynayo. Waxaanu kuu soo diri doonaa lambarkaaga raadinta adiga oo isticmaalaya email-kaaga.
Waxaanu u dirnaa dhammaan amarrada Adeega Boostada Mareykanka (www.USPS.com) adoo adeegsanaya boostada taariikhda mudnaanta leh ee 2-3 ka dib markii amarkaaga dhammeeyey.
Fidinta Timaha Dabiiciga ah MASUUL MA AHA mas'uuliyadda qof kasta xirmooyinka lumay ama la xaday mar mar la socodka ayaa la xaqiijiyay in la bixiyey. Uma celineyno iibsadayaasha wixii khaanad ah ee lumay ama la xaday sababtoo ah xaalado aan la filayn oo ka baxsan xakamaynta Timaha Xayawaanka Dabiiciga ah. Fadlan hubi inaad u soo dirayso meel ammaan ah. Amarada oo dhan ayaa la imaan doona $ 50 qiimo caymis haddii aad jeclaan lahayd inaad hubiso qadarka buuxa fadlan annaga nagala soo xiriir adigoo soo diraya lambarkaaga lambarkaaga ka dib iibsashada.
amarrada $ 250 ama ka badan waxay u qalmaan maraakiibta bilaashka ah! Inaad dooratid inaad bixisid maraakiibta ma gaari doonto si dhakhso ah.
Fadlan saar amarka taariikhda ku siin doona wakhti ku filan si aad u hesho amarkaaga ka hor ballanta timahaaga. Waqtiga lagu shaqeynayo lama soo koobi karo ama la muujin karo. Si kastaba ha ahaatee wakhtiga maraakiibtu waa la muujin karaa.
LOOGU TALAGALAY DALKA (dhammaan waddamada aan ka ahayn Mareykanka)
Amarada ayaa la soo marin doonaa USPS (www.USPS.com) ka dib markii la oggol yahay waqtiga shaqada.
Gaadiidka wuxuu ka koobnaan karaa 25 $ - $ 65 amarada caalamiga ah.
Baakado kasta oo aan la sheegin oo nagu soo noqonaya waxay heli doonaan lacag celinta ganacsiga kaliya. Lacagaha dhoofinta dib looma celin doono.
Iyada oo ku xiran waddankaaga ayaa xirmadaada ku xiran kartaa a canshuurta kastamka ama khidmadda shaqada marka ay timaado. Kharashkan dheeraadka ahi ma aha khidmadda ay bixiso MNHE ama Mareykanka. Fadlan ka hubi wakaaladda canshuuraha ee deegaankaaga si aad u ogaato haddii ujradaasi ku khuseyso adiga. Haddii ay sidaas tahay waxaa lagaa rabaa inaad bixiso lacagtaas si aad u hesho badeecadaada.
Fidinta Timaha Dabiiciga ah MASUUL MA AHA mas'uuliyadda qof kasta xirmooyinka lumay ama la xaday mar mar la socodka ayaa la xaqiijiyay in la bixiyey. Uma celineyno iibsadayaasha wixii khaanad ah ee lumay ama la xaday sababtoo ah xaalado aan la filayn oo ka baxsan xakamaynta Timaha Xayawaanka Dabiiciga ah. Fadlan hubi inaad u soo dirayso meel ammaan ah. Amarada oo dhan ayaa la imaan doona $ 100 qiimo caymis haddii aad jeclaan lahayd inaad hubiso qadarka buuxa fadlan annaga nagala soo xiriir adigoo soo diraya lambarkaaga lambarkaaga ka dib iibsashada.
Miyey tahay dayactir shaqo maalmeedka 5-6, haddii ay qaadato waqti dheer, ma heli karaa lacag celin.
Ma aha garoon, Waa qiyaas. Waxay noqon kartaa mid ka dheer ama gaaban marka loo eego celceliska waqtiga shaqada. Si kastaba ha ahaatee waxaan sameynaa sida ugu fiican ee aan ku heli karno amarada oo dhan wakhtigaas. 🙂
May 8, 2018 at 5: 53 pm
timaha tijaabada ayaa si siman u qaadaya mudada dheer ee helitaanka?
Sidoo kale, miyaad leedahay timo buluug ah si aad uhesho? Waxaan ku arkaa goobtaada si aad u dalbato, waxaa laga yaabaa inaan akhriyo si qalad ah, laakiin waxaan u maleynayey inay muujineyso inaan la heli karin ...
May 8, 2018 at 10: 35 pm
Hello. Ma jiraan maraakiib maraakiib ah oo ku saabsan maalmaha ganacsiga 1 - 2.
Haddaba waxa lagu qiyaasaa ka shaqeynta iyo maraakiibta timaha waaweyn ee loo isticmaalo taajir iyo naqshadaynta?
December 27, 2018 at 5: 55 pm
Waxay kuxirantahay habka amarka ee hadda jira. Caadi ahaan 1-2 laga bilaabo wakhtiga aad dalbato in ay gaarsiiso albaabka.